Rokeach 'मूल्य झुकाव को "तरिका: परिणाम व्याख्या र प्रशोधन
XX मा शताब्दीमा एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिल्टन Rokeach बस्थे। लगभग आफ्नो सम्पूर्ण पेसा उहाँले सामाजिक र व्यक्तिगत मान को अध्ययन गर्न समर्पित। मिल्टन एक मानसिक रोगको चिकित्सक रूपमा थाले हुनत। तर व्यक्तिगत को मूल्य झुकाव को अद्वितीय अवधारणा विकासकर्ता रूपमा चिनिन्छ। र यो प्रविधी Rokeach विश्वव्यापी ख्याति विशाल उठाउँछ। यो आधारमा परीक्षण रूपमा। तथापि, पहिलो कुरा पहिले।
Rokeach प्रविधी विचार वरिपरि निर्मित छ प्राथमिकता को सिद्धान्त मा एक निश्चयताका को मूल्य जो एक विशेष (दर्शन, जीवन को बाटो, जीवन को उद्देश्य, र यति मा। डी)। तर, एक मनोवैज्ञानिक उनि धेरै छैन भनेर सुझाव रूपमा।
टर्मिनल र सहायक - ती सबै मिल्टन दुई प्रकार मा विभाजित छन्। पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अस्तित्व को परम लक्ष्य साँच्चै यो उनको पुग्न प्रयास गर्न लायक छ के विश्वास समावेश गर्नुहोस्।
दोस्रो प्रकार सहायक मान भनिन्छ। यो, बारी मा, बारे विश्वास के व्यक्ति वा उनको कार्यहरूको छविको सम्पत्ति को प्रकारको सधैं र कुनै पनि अवस्थामा छन् एक प्राथमिकता रहनेछ।
तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न को तरिका, र कार्य तस्बिरहरू - त्यो पहिलो प्रकार व्यक्तिगत अस्तित्वको लक्ष्य, र दोस्रो असर गर्छ, छ।
Rokeach प्रविधी पनि तार्किक छ, जीवन को विशिष्ट क्षेत्रहरु सम्बन्धी सबै अभियुक्तहरुलाई दोषी देखि मान को विश्लेषण र समूहहरू तिनीहरूलाई विभाजन, समावेश छ। तदनुसार, त्यहाँ व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक पूरा, वित्तीय (सामाग्री) र आध्यात्मिक मानहरू छन्। माथिको-उल्लेख प्रकार द्वारा छन् संचार, नैतिकता, व्यापार, परोपकारिता, आत्म-दाबी, र अन्य बारेमा सहायक विश्वास।
Rokeach प्रविधी, अभ्यास शो रूपमा, एक रोचक र प्रभावकारी हुन्छ। यसको फाइदा लचीलापन, दक्षता र सुविधा मा निहित। तपाईं धेरै सजिलै, साथै प्रक्रिया परिणाम यो संग व्यक्ति "निरीक्षण"। र (अन्यथा उत्तेजना सामाग्री को रूप मा) मान सूची भिन्न हुन सक्छन्, र निर्देशन परिमार्जन गर्नुहोस्।
तर, केही छुट्टयाएर बेफाइदा। यी सामाजिक undesirability र परीक्षण गर्न सहमत भएको छ जसले एक व्यक्ति, disingenuous छ कि likelihood समावेश गर्नुहोस्।
अनुसन्धान कस्तो छ?
स्पष्ट - त्यसैले, एम Rokeach को विधि के छ। उहाँले परीक्षण कसरी पारित गरे?
जो मानहरू (सहायक र टर्मिनल) सूची मानिसले दुई सूची प्रस्ताव। 18 प्रत्येक। के रूप मा छ, सिद्धान्त, यो कुरा छैन। तिनीहरूले सामान्यतया सूची वा कार्ड मा A4 को पानाहरू मा प्रदान गरिन्छ।
एक व्यक्ति सामाग्री प्राप्त गरेको छ जब उहाँले कार्य दिइएको छ - संख्या प्रत्येक मूल्य नियुक्त गर्न। पहिलो त्यो उपकरण गर्न टर्मिनलमा सूची सामना गर्न, र त्यसपछि भएको थियो।
सामान्यतया पूरा जस्तै परीक्षण गर्ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्राथमिकताहरू अन्तर्गत तिनीहरूलाई नजिक प्रणाली ल्याउन भनेर प्रश्न हुन सक्छ। अक्सर तिनीहरूले मान आफ्नो जीवनमा बुझे कसरी रुचि राख्नुहुन्छ। जिम्मेवार, सामान्यतया प्रतिशतको रूपमा। मान्छे कार्डहरू कसरी व्यवस्था थियो5वा 10 वर्ष पहिले थप प्रश्न गर्न सक्छन्। वा तिनीहरूले उहाँलाई नजिक मानिसहरू वितरण हुनेछ कसरी। प्रश्न, अन्य थप व्यक्तिगत समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो परीक्षण, स्वैच्छिक थियो र प्राथमिकताको, अनुहार-को अनुहार बाहिर धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
सूची नम्बर 1
अब तपाईं प्रविधी "मूल्य अभिमुखीकरण" समावेश Rokeach को अवधारणाहरु सीधा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सूची - थर्मल। यसलाई निम्न अवधारणाहरु समावेश:
एक आकर्षक काम।
कला र प्रकृति।
प्रेम र आत्मीयता।
वफादार साथी उपस्थिति।
आदर र अरूको पहिचान।
उत्पादक ( "पूर्ण" प्रयोग संभावनाहरु र अवसर) बाँच्न मौका।
मनोरञ्जन र आराम।
स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आनन्द।
मौका रचनात्मक हुन।
त्यसैले यो टर्मिनलमा सूची समावेश जो 18 मान, छ। कार्ड कोष्ठक मा सामान्यतया मा तपाईं चाहनुभएको छ के बुझ्न सक्छौं आफ्नो सङ्कल्प, तर पनि यति ठूलो संकेत गर्छ।
सूची नम्बर 2
तर छैन समावेश प्रविधी Rokeach सबै छ। परिणाम संसाधन एक मानिस प्रत्येक सूची सामना गर्नेछ रूपमा मात्र एक मनोवैज्ञानिक पछि बाहिर छ। र दोस्रो उपकरण समावेश:
जीवनको आनन्द उठाउन सक्ने क्षमता।
मानिसहरू र संसारको उच्च आवश्यकताहरु।
बेफाइदा स्वीकार गर्न नसक्नुको (आफैलाई मा र अरूलाई मा)।
बुद्धि र शिक्षा।
खुला-दिमाग, एक "रूपरेखा" को अभाव।
मेहनत र उत्पादकत्व।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सूचीहरू मौलिक फरक। कम से कम दोस्रो सूचीमा अक्सर जमीन हस्तान्तरण छ प्राप्त को प्रक्रिया मा एक भूमिका निर्वाह जो, व्यक्तिगत गुणहरू सम्बन्धित अवधारणाहरु समावेश भन्ने तथ्यलाई।
परीक्षण कसरी लिने?
धेरै सुरुमा म मूल्य प्रत्येक सिरियल नम्बर गर्न श्रेय बताए। न्यूनतम - 1, जबकि अधिकतम - एकाइ चिन्ह लगाइएको कुनै मूल्य छ कि मान 5। Deuce - सिद्धान्त मा, महत्वपूर्ण हुन सक्छ गर्नेहरूलाई। Troika - एक निश्चित, विशिष्ट मूल्य को मूल्य। Quartet - महत्त्वपूर्ण बयान। र Quintet - एक व्यक्ति सबै माथि राख्छ के।
नतिजा कसरी निर्धारण गर्ने?
यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। Rokeach विधि को परिणाम सामान्यतया परीक्षण पनि यसलाई सञ्चालन र थिए, मनोविज्ञान निर्धारण गरिन्छ। तर सामान्य मामलामा यो पूरा तपाईं कसरी बताउन पर्छ।
यसरी, परीक्षण अन्वेषण गर्ने लक्ष्य लिएको छ मानव मान। राम्रो आफ्नो कार्यहरू वा व्यवहार को अर्थ बुझ्न। परिणाम मात्रा को तथाकथित विश्वसनीयता द्वारा निर्धारित छन्। यो एक व्यक्तिले आफ्नो कार्यहरू सकारात्मक अरूले मूल्यांकन कति चाहन्छ निर्धारण गर्न डिजाइन गरिएको छ। उच्च परिणाम हो - अधिक विषय तथाकथित "endorses" छवि पारस्परिक रहेको छ। तर महत्वपूर्ण सीमा परीक्षण साधारण 42 अंक चिन्ह स्वीकृत भएको छ। आफ्नो को परिणाम क्रस भने, त्यसपछि त तिनीहरूले विश्वसनीय छन्, र मानिस बेइमान थियो, वा जटिल व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक अगाडि बसेर।
तर खातामा एक मानिस पर्दाफास नम्बर मान गोल ती अंक लिएको छैन। मनोवैज्ञानिक को मात्रा को विश्वसनीयता बुझाउँछ। एक व्यक्ति भने, उदाहरणका लागि, नकारात्मक मात्रा बुझाउँछ जो बयान, पाँच राख्नु, उहाँले 1 बिन्दु सम्मानित गरिएको थियो। नकारात्मक मूल्य वहन कुरा, त्यो एकाइ भने? त्यसपछि उहाँले "पाँच" राखे। मात्रा धेरै volumetric छ, तर यो संग यदि चाहेको, व्यक्तिगत पहुँच गर्न सकिन्छ।
त्यसैले, सामान्य मा, यो स्पष्ट Rokeach 'मूल्य अभिमुखीकरण को एक विधि हो भन्ने छ। " परिणाम - प्रोसेसिंग मामला एक मनोवैज्ञानिक, तर व्याख्याहरु थोडा कुरा गर्नुपर्छ बारेमा भन्ने हो। तिनीहरूलाई धेरै।
मा व्याख्यालाई प्रविधी Rokeach जीवन मान। आत्म-विकास, आध्यात्मिक सन्तुष्टि, रचनात्मकता, सामाजिक अन्तरक्रिया, प्रतिष्ठा र सम्मान, र सफलता, धन र आर्थिक वा व्यक्तिगत पहिचान को संरक्षण, विशिष्टताको हासिल गर्न - तपाईं परीक्षण को संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई पत्ता लगाउन एक व्यक्ति आफ्नो मुख्य उद्देश्य छ भन्ने विश्वास उत्तेजित गर्दछ परिणाम।
यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा व्याख्यालाई छ। एक पेशेवर, शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोरञ्जन वा शारीरिक गतिविधि स्कोप - परीक्षण समयमा, यो के क्षेत्र एक व्यक्ति लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, बाहिर जान्छ।
यी दुई भन्दा साधारण व्याख्या हो। तर, यो तिनीहरू किन कुनै आश्चर्य छ। एक व्याख्या व्यक्तिको भित्री संसार प्रस्ट्याउने उद्देश्य छ। र अन्य - आफ्नो बाहिरी संसार मा र क्षेत्र जसमा उहाँले सहज त्यहाँ महसुस। तर, दुवै inextricably लिङ्क छन्।
तपाईं अरू के थाहा हुनुपर्छ?
यस «मूल्य झुकाव" ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा पाए। पनि मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिकहरू यो सबैभन्दा विकसित र विश्वसनीय छ भन्छन्। यो किनभने मिल्टन Rokeach सिद्धान्त मा मूल्य को अवधारणा को संस्थापक छ, आश्चर्य छैन।
र यसको प्रभावकारिता सिद्ध छ। विभिन्न अध्ययन सञ्चालन - र सक्रिय, को पाठ्यक्रम, युवाहरूलाई तिनीहरूलाई, pupils र विद्यार्थी संलग्न। विशेष गरी वरिष्ठ। र ती सबै भन्दा टर्मिनल मान स्वास्थ्य, परिवार, साथी, प्रेम, वित्तीय समृद्धि र आत्म-विश्वास माथि राख्नु हो। उपकरण सूचीबाट, धेरै cheerfulness, जिम्मेवारी, व्यवहार, धैर्य र लगनशीलताको छान्नुभएको छ। यो विकल्प अचम्मको छैन। यसबाहेक, यो सही र अपेक्षित छ। धेरै विश्वव्यापी किशोरकिशोरीहरूको लागि? सुदूर यसलाई देखि। यो पुष्टि - यो मनोवैज्ञानिक एरिक Erikson भन्दै। उहाँले आफ्नो तरिका को मान्छे, "Acrobats" हुनुपर्छ भनेर आश्वासन दिए। आफ्नो बाल्यकाल को पट्टी कम शक्तिशाली आन्दोलन हुन, यो भन्दा बढी हाम फाल्न र अर्को पट्टी परिपक्वता लो सक्षम हुन। र समय छोटो सम्भव अवधिको लागि।
र यो केवल एउटा उदाहरण हो। वास्तवमा, मिल्टन Rokeach को विधि साँच्चै, रोचक प्रभावकारी र कुशल छ। र तपाईं चाहनुहुन्छ भने, संभावना संग - यस्तो परीक्षण पारित गर्न यो आवश्यक छ। एक्लै वा अरू कसैले संग - जो तपाईंलाई रुचि। कम्तिमा चासो खातिर।
Bert Hellinger - systemic परिवार नक्षत्र को विधि को संस्थापक। जीवनी, पुस्तकहरू
मार्टिन Seligman, सकारात्मक मनोविज्ञान को संस्थापक
मनोविज्ञान मा प्रतिबिम्ब के हो? अवधारणा र विचार को सार
Mishel Rodriges: जीवनी "खराब केटी"
गिरजाघर वरोकला (वरोकला, पोल्याण्ड) फोटो र समीक्षा
10 मिनेट बिहान शवर समय बचाउँछ र अनुमति दिन्छ रूपमा आराम गर्न